TODOBAADKAN IYO CAYAARIHII KUBADDA KOLAYGA NBA-DA - Kubadda Somali Sport Portal
Kubadda Webmaster / Saturday, November 3, 2012
/ Categories: Basketball
TODOBAADKAN IYO CAYAARIHII KUBADDA KOLAYGA NBA-DA
Waxaa todobaadkan dib u bilawday ciyaarihii Kubadda Kolayga ee NBA, Kooxaha badankood oo soo xoojiyey awooda kooxeed , iyo tayada ciyaartoy ayaa waxaa bilawgiiba fooda isa saaray kooxo lagu doorbidayey awood heerar sarena ah.
Waxaa Talaadadii 30ka bishii Oktoobar lagu furay saddex cayaarood oo sidan u dhacay:
Washington Wizards (Marti) 84 Cleveland Cavaliers (Soore) 94 waxaana fudeyd ku guuleystay kooxda degan magaaladda Cleveland ee gobolks Ohio.
Dallas Mavericks oo marti u ahaa kooxda farta lagu wada fiiqayey ee Los Angeles Lakers ayaa guushii ku raacday 99 halka kooxda ay u safanaayeen Steve Nash, Dwight Howard, Pau Gasol, Kobe Bryant, iyo Darius Johnson-Odom oo dhaliyey 91. Ma ahayn mid ay la yabeen dadka U kuur gala ciyaaraha maadaama sideed ciyaarood oo xiriir ah looga badiyey diyaargarowgii, ayna dhaawac ka yihiin Howard, Kope, iyo Nash oo hadda dhaawacmay.
Kooxda Boston ee loo yaqaa Celtics ayaa afka u gashay horyaalkii sanadkii la soo dhaafay ee Miami Heat. Ciyaartan oo ciyaar xiiso badan ahayd ayaa guushu ku raacday Miami 120, halka Boston keentay 107. Waxaa xusid mudan in ciyaartoygii ugu wanaagsanaa LeBron James uusan cayaarta qayb ka qaadan dhamaadkii.
Arbacadii, 1da Nofember 2012, waxaa dhacay sagaal ciyaarood, waxaana geba gebadii noqotay
Arbacadii 31ka Oktoobar, waxaa dhacay sagaal cayaarood oo saatan u dhacay.
Memphis Vs L.A. Clippers
Khamiistii 1da, Nofember waxaa la cayaaray hal ciyaar. Waxaa ku kulmay garoonka loo yaqaan AT&T Center, ee ku yaala San Antonio, TX kooxda San Antonio SPURS, oo martgelisay OKC Thunder waxaan damaadkii cayaarta San Antonio ku guuleysatay 86 halka OKC ay dhaliyeen 84 dhibcood, kadib markii ciyaartoyga Tony Parker uu iska daba dhaliyey 3 dhibcood oo sintay labada kooxood, iyo 2dhibcood oo guusha ay ku hanteen. OKC uma qalmin in laga badiyo kubadda kolayguse ma laha barbaro.
Wed, Oct 31 • Thu, Nov 1 and Fri, Nov 2 .
Waxaa dib loo dhigay ciyaartii dhex mari lahayd New York Knicks oo marti u noqon lahayd deriskooda New Jersey. Burburkii iyo daadkii magaalooyinkaas nuskood aafeeyay aawgood.
Waxaa soo diyaariyay: Hassan Farah (macalin John)
Previous Article Kullan Looga Hadlayey Kaalinta Qurba Joogta oo Ay soo Abaabushay Hay`adda CRD oo Ka Dhacay Birmingham, Uk
Next Article WAR NAXDIN LEH OO NAGA SOO GAARAY WASAARADDA ARIMAHA DIBADDA
4229 Rate this article: